ငါဘာကြောင့် Blog လုပ်တာလဲ | Martech Zone
ငါဘာကြောင့် Blog လုပ်တာလဲ
တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 12, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ငါ tagged ခဲ့သည် Dawud အံ့ဖွယ်အမှုဘာကြောင့်ငါ Blog လုပ်တာလဲ? ဒါကစာဖတ်သူဆီကလက်ခံတဲ့အီးမေးလ်ပါ ယနေ့တွင်သူ၏အမည်ကားဒန်ဖြစ်၏။
ဒါကြောင့် ... ငါဘလော့ဂါဒါကြောင့်ပါပဲ။ အဲဒီလိုအီးမေးလ်တွေ၊ မှတ်ချက်တွေကကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဝေမျှရတာကိုအားရကျေနပ်မိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်မည်သူ့ကိုမျှအမှတ်အသားပြုမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ blogroll တွင်ရှိသူတိုင်းကိုဤအဖြေကိုနှစ်သက်လိုသည်၊ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးပေါ် - တိုနီ.
PS: ငါ ဖြေကြား ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီကျောအရှည်မှာဤမေးခွန်းကို။ သို့သော်ယနေ့ငါဒန်မှရရှိသောအီးမေးလ်ကကျွန်ုပ်ဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ဇူလိုင်လကရှင်းပြချက်အပြည့်အစုံထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘလော့ဂ်ရေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
12:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 8, 36 တွင်
ကောင်လေးငါတို့အတူတူလှိုင်းအလျားပေါ်ရှိ! ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်၏စာဖတ်သူများအားဤမေးခွန်းကိုတင်ပြခဲ့သည်မှာအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတုံ့ပြန်မှုများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ ၂ ဆင့်။
12:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 8, 44 တွင်
ဟုတ်ကဲ့! အကောင်းဆုံးအကြောင်းပြချက်ကစာဖတ်သူတွေကမင်းကိုချစ်တဲ့အတွက်ပဲ။ ငါပိုကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုစဉ်းစားလို့မရပါဘူး ငါပထမ ဦး ဆုံးစဉ်းစားကြလိမ့်မယ်အလိုရှိ၏။